Garowe: Koobka kooxaha heerka 1aad
27 Jun 27, 2012 - 6:48:40 AM
Garoonka kubadda cagta Mire Awaare ee Garowe waxa lagu soo gabagabeeyey tartankii kooxaha heerka koowaad ee magaalada oo dhowaanahan ka socdey halkaasi ayna ka qaybgaleen ilaa 8 kooxood oo u kala ciyaarayey qaar xarumaha dowaldda iyo shirkadaha ganacsiga magacaydooda.
Kooxaha Horseed,Dowladda Hoose ,Barakacayaasha ,SBC ,Saxansaxo ,Somda ,Nation-Link iyo Maamuus ayay kala ahayaaen kooxuhu oo ugu daynbeyntii kooxaha Somada iyo Nation-Link isugu yimaadeen.
Inkastoo 90-daqiiqo ee ciyaartu socotey lagu kala bixi goolalna iska dhalin kari waayeen haddana waxa la aadey dhinaca Gool kulaadyada (Rikoore) oo u sahashey kooxda Nation-Link inay hanato koobki ugu horeyey ee kooxaha heerka koowaad loo qabtey.
Dhinaca tarabuunka Mire Awaare ayaa waxa ku kala qaybsanaa taageerayaasha labada kooxood oo qaar kamida horey afka ciida loogu soo darey balse ku adkeystey daawashada ciyaartan xiisaha gaar ah leh waxana sacabka iyo sawaxankooda laga maqlayey qaybo kamid ah Garowe halka farxada kooxda adkaateyna ilaa xalay laga dareemayey guud ahaan wadooyinka magaalada.
Xarunta Idaacada Radio Garowe ayaa maanta 27 June,2012 waxa soo booqdey qaar kamida ciyaaryahanadii koobka qaadey waxana ugu horeyn ay mahad u soo jeediyeen maamulka shirkada isgaarsiinta Nation-Link oo ay sheegeen in taageero iyo dhiirigelin ay la garabtaagnayeen intii uu socdey tartankani.
Wareegyada kubadda cagta ee loo qabto dhalinyarada ayaa banooniga ka sokow waxa jira in ka galaan khaanada isdhexgalka bulshada ,wacyigelinta nabadgelyada iyo weliba in dhalinta laga jeedinayo falalka argagixisanimo ama ku biiritaanka kooxaha burcad badeeda ah.
Halkan ka dhageyso Fahad Jaamac oo wareystey ciyaartoyda Nation Link
Madaxweynaha Puntland oo lagu taageray Toronto
Saddex qof oo la xakumay Muqdisho
Nelson Mandela oo la aasayo 15